Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Safe Energy Kenya Limited) Oo Mudo Afar Sanadood Gudahood Ah Noqotay Shirkadda Ugu Weyn Ee Dalka Kenya Keenta Gaaska – Codka Qaranka Tanadland
Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Safe Energy Kenya Limited) Oo Mudo Afar Sanadood Gudahood Ah Noqotay Shirkadda Ugu Weyn Ee Dalka Kenya Keenta Gaaska
Sawirka Gudoomiyaha Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Eng. C/risaaq Caafi Axmed Oo Warfidiyeenada La Hadllaya.
Mudo haatan laga joogo labo sanadood ayaan waxaan maqaal ka qoray beecmushteriga soomaalidu ay ku leeyihiin wadanka Kenya. Waxaan maqaalkaas aan ku xusay in ganacsatada beecmushteriga ugu balaaran ku leh wadanka Kenya, inay yihiin ganacsatada beesha Ogaadeen. Waxaan sidoo kale aan maqaalkaas ku sheegay in ganacsatada beesha Dhulbahante ay kaalinta labaad ku jiraan. Ganacsatada reer Tanadland na waxaan ku qiimeeyey inay ku jiraan kaalinta sadexaad. Wakhtiga aan maqaalkaas qoray waxay ahayd sanadkii 2014-ka. Dabcan ganacsatada reer Tanadland waa ganacsatada soomaalida ugu shirkaddaha iyo iskaashatooyinka badan. Saas darteed ganacsatada reer Tanadland inay mar uun ay beecmushteriga Kenya intay ku soo faalalaan, ay ilaha ugu muhiimsan ay ka qabsandoonaan waa an maleynayey. Laakiin marna isma aanan lahayn, ganacsatada reer Tanadland ayaa beecmushteri ka balaaran kan beesha Ogaadeen ku yeelanaya Kenya 20 sanaddood wax ka yar.
Dadka reer Tanadland waa dad aad u karti iyo waxqabad badan. Labaatanka magaalo ee ugu waaweyn waqooyiga ameerika, ee ay dadka soommalida ahi ugu badanyihiin, magaalada (San diego) mooyaane inta kale ganacsiyada ugu waaweyn waxaa iska leh ganacsato reer Tanadland ah. Laakiin taas macnaheedu maaha inay magaalooyinkaas ay soomaalida kale uga badanyihiin marka labo magaalo oo kaliya laga reebo. Labadaas magaalana waa Toronto iyo (Seattle, Washington). Magaalada Toronto waayadii hore dadka reer Tanadland iyo soomaalida kale oo dhan ayaa is le’ekaa. Laakiin hada iyo intii uu dalku bur-buray oo ay soomaalidu soo badatay weli dadka reer Tanadland waa dadka ugu badan soomaalida Toronto degan. Sidoo kale magaalada (Seattle) ee gobalka Washington dadka reer Tanadland waayadii hore iyo hadaba waa dadka ugu badan soomaalida ee magaalada degan.
Laakiin arinta xaqiiqda ah oo la yaabka lihi waxa weeye, marka hada ah beecmushteriga ugu balaaran ee soomaalidu ay ku leedahay wadanka Kenya waxaa iska leh ganacsatada reer Tanadland. Waxaana la filayaa in iskaashatooyinka iyo shirkaddaha reer tanadland ee wadanka keenya inay intaas ka sii bataan. Maadaama ay dadka reer Tanadland ay yihiin dad guud ahaan beecmushteriga iyo shirkaddaha samayntooda ku wanaagsan.
Mideeda kale dadka reer Tanadland waa ay ka dhaqan duwanyihiin soomaalida kale, metalan soomaalida wadamada reer galbeedka degan meherada ugu badan ee ay ragu ku shaqaystaan waa tagsiile. Waxaa laga yaabaa magaaladii 5 nin oo tagsiileyaal ah oo reer Tanadland ahi ay deganyihiin in labo ka mid ahi ay jaamacad si aan joogto ahayn ay u dhigtaan. Dadka reer Tanadland waa dadka Soomaalida ugu xirfadleyaasha badan. Waana dhif iyo naadir in la arko nin reer Tanadland ah oo micnola’aan maqaayad u fadhiya oo ka sheekaynaya. Waqooyiga ameerika dadka reer Tanadland waxaa lagu xifaaleynjirey mudo dheer inay yihiin dad aan la fahmikarin oo u dhaqma sida yuhuuda.
Hada wadanka Kenya waxaa iska caadi noqotay oo dadka reer Tanadland lagu xifaaleeyaa. Inay haystaan mashiino u qarsoon oo ay lacgta doolarka ah ku samaystaan. Sababta oo ay tahay dad badan oo waxaa jira u qaadan’la, in ganacsatada reer Tanadland ay kartidooda ku kasbadeen inay yeeshaan shirkaddaha ugu waaweyn ee ay soomaalidu ku leeyihiin dalka Kenya.
Sawirka Gaaska Qarxa Ee Birta Culus Ku Jira Oo Mooto Lagu Daabulayo.
Sidaad ogsoontihiin wadanka Kenya waa wadan aad u balaaran oo leh beecmushteriga ugu weyn wadamada geeska afrika ku yaala. Wadanka keenya wuxuu leeyahay boqolaal shirkaddood oo madaxbanaan, oo gaaska cuntada lagu karsado ee looyaqaan (Liquefied Petroleum Gas “LPG”) dalka Kenya keena. Kenya waxaa kaloo ka jira kumanaan shirkaddood oo gaaska “LPG” ah ga jimlo iyo tafaariikh u gada. Kenya waxaa kaloo ka jira shirkaddo ay reer galbeedku leeyihiin oo gaaska keena jimlo iyo tafaariikhna u gada. Waxaa kaloo wadanka Kenya degan labo shirkaddood oo ay ganacsato soomaaliyeed leeyihiin, oo 20 sanaddood iyo in ka badan gaaska ka ganacsanayey. Shirkaddohaas oo kala ah shirkadda baaxadda weyn ee (Hass Petroleum (K) Ltd) iyo (Hashi Energy).
Sawirka gaaska amaanka ah ee (Save Gas) ee ay leedahay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited)
Marka run ahaantii wax macquul noqonkara umay eka in suuqa sidaas u baaxadda weyn oo ay ku tartamayaan boqolaalka shirkaddood, ay hal shirkaddi qabsato oo ay hantido cid kastaaba ha’ay la’haatee. Laakiin run ahaantii dalka Kenya waxaa ka dhacday arin mucjiso ah oo ilaa iyo hada Soomaalida Kenya degani ay la dhakafaarsanyihiin.
Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) Iyo Hadafka Loo Aas-aasay :-
Dabayaaqadii sanadkii 2013 -ka waxaa magaalada Bosaso laga hirgeliyey shirkad la yiraahdo (ECCO Group) oo samaysa mashiino cuntada lagu karsado oo dhuxuldhagaxda iyo cadceeda ku shaqeeya. Shirkadda (ECCO Group) waxaa iska leh injineer reer Tanadland ah oo ka soo jeeda beesha (Reer Maxamed Carab), oo la yiraahdo (Eng. Cabdisalaam Shiikh Xasan). Shirkadda (ECCO Group) qalabka dhuxuldhagaxda iyo cadceeda ku shaqeeya (Eng. Cabdisalaam) ayaa hindisey oo naqshadda u sameeyey. Laakii aaladda shirkadda (ECCO Group) ninka iska lihi uu hindisey isaga ayaa samaysta. Walow ay jirto in qalabka cadceeda ku shaqeeya iyo fiilooyinka uu midba gooni jimlo uu ugu soo iibsado.
Iyadoo ay taasi jirto, ayaa hadana waxaa jirta in sanadkii shirkadda (ECCO Group) la aas-aasay ee 2013 -ka, sanadkii ha horeeyey ee 2012 -ka la aas-aasay iskaashatada baaxadda weyn ee iska leh shirkadda (Safe Energy Kenya limited). Waxaana la orankaraa (Eng. Cabdisalaam Shiikh Xasan) waxaa dhiirigaliyey oo uu ka shidaal qaatay shirkadda baaxadda weyn ee (Safe Energy Kenya limited). Shirkadda (Safe Energy Kenya limited) ujeedada ugu muhiimsan ee loo aas-aasay waxay ahayd, inay noqoto shirkadda ugu weyn ee ka ganacsata gaaska la shito wadamada ku yaala geeska afrika. Talada iyo qorshaha lagu aas-aasay iskaashatada iska leh shirkadda (Safe Energy Kenya Limited), waxaa igu maqaalo ah in uu lahaa gudoomiyaha shirkadda (Safe Energy Kenya Limited).
Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Safe Energy Kenya Limited) Iyo Hawlaha Ay Qabato :-
Sawirka gabar yar oo jaran-jarada kula ordeysa gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited).
Gaaska la shito ee cuntada lagu karsado ka ganacsigiisu dhawr arimoodba waa u uga duwanyahay shidaalka badroolka. Sideedaba labo qolo un baa gaaska ka macaashta. Labadaas qolona waa wadamada gaaska soo saara iyo shirkaddaha warshadeeya oo haamaha lagu gato sameeya. Laakiin labadaas qolo qof aan ahayn oo yiraahda gaaska waa’an ka mushtarayaa, waa ay adagtahay si uu nacfi uga helo. Iyadoo ay saas tahay ayaad hadana moodaa in shirkaddaha batroolka ka ganacsadaahi ay ku qasbanyihiin, in faa’iido loogu xishaba yaysan ka heline inay gaaska iibiyaan oo aan laga waayin. Sababta oo ay tahay dunida sadexaad gaaska la shito waxaa gata dabaqada dhexe iyo dadka ladan. Marka qofka gaaska isticmaala waxaa laasim ah in uu gaadiid leeyahay oo u meesha uu badroolka ka gato uu gaaskana ka gato.
Mideeda kale, shirkaddaha gaaska ka ganacsada ee wadamada bariga afrika ku yaala waa shirkaddaha badroolka ka ganacsada. Shirkaddaha soomaalida shirkadda ugu weyn ee gaaska ka ganacsata soona dejisaana waa (Petro Africa) iyaduna nacfi kama ay hesho ee badroolka ayey ku socodsiisaa.
Waxqabatka Iyo Qorshaha Ay Meelmarisay Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited)
Gaaska la shito dunida labo siyaalood ayaa loo isticmaalaa.
1. Wadamada horay u maray ee qaniga ah gaaska la shito waxaa qaada tuubooyin amaan ah oo hadba meeshii looga baahdo, sida tuubooyinka biyaha qaada loo geliyo.
2. Dunida sadexaad iyo wadamada saboolka ahse waxaa laga isticmaalaa haamaha birta ah oo halista ah ee qarxa. Aalaana konteenarada gaaska lagu qaado ayaa inta dibeda looga keeno markaas haamaha yar-yar lagu shub-shubaa.
Mideeda kale, farsamada iyo qalabka gaaska ee haamaha birta ah oo qarxa waa sanco gabowdey oo 60 sano jir ah. Metalan wadamada horay umaray sida USA, Canada, Germany iyo Japan, hadaad shidaale ama suuq aad tagtid oo aad gaas iibsaneysid. Waxaa lagaa iibinayaa gaaska halista ah ee ku jira haamaha birta ah oo qaraxa.
Marka shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) iskaashatada iska leh hadafkeedu wuxuu ahaa si ay gaaska ka ganacsigiisa ay macaash uga helaan inay 4 arimood sameeyaan.
1) Inay gaaska hanti farobadan geliyaan oo xadi aad u badan ay soo gataan si ay gaas raqiis ah u helaan.
2) Inay gaaska haamaha lagu shubo ay warshad u samaysa ay gataan oo iyagu haamahooda ay samaystaan.
3) Gaaska haamaha lagu shubayaana inay noqdaan haamo aan bir ahayn oo fudud oo ay caruurtu ay qaadikaraaan.
4) Haamaha gaaska ee shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) na ay noqaan haamo amaan ah oo aan laga yaabin inay qarxaan ama uu dab ka dhasho.
Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) iyada oo ka dhabaynaysa hdafkeedii ganacsi ayey dhul balaaran waxay ka iibsatey aaga warshadaha ee magaalada Nairobi sanadkii 2011 ka. Dhul kaas oo ku yaala wadada warshadaha ee (Lunga Lunga Road). Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxay heshiis la gashay shirkadda (Hexagon Ragasco) isla sanadkii 2011 -ka, heshiis kaas oo ah hadii haamaha amaanka ah ee ay samayso shirkadda (Hexagon Ragasco) ay suuq ku yeeshaan bariga afrika, oo ay suuq u helaan. In markaas shirkadda (Hexagon Ragasco) ay ka iibsan doonaan qalabka warshadda samaysa haamaha amaanka ah. Dabeedna waxay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay heshiis la gashay shirkadda aduunka ugu weyn ee gaaska la shito debeda u dhoofisa oo ah shirkadda (Qatar Gas). Waxayna sicir jaban ay kula heshiisey inay gaas aad u badan ay si jogto ah uga qaadato. https://www.qatargas.com/English/Pages/default.aspx
Sanadkii 2012 -ka shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxay bilowday soo dejinta haamaha amaanka ah iyo gaaska la shito. Xaruntii ugu horeysey ee gaaska haamaha amaanka ah lagu shu-shubana waxay ka furatay wadada warshadaha ee magaalada Nairobi.
Safe Energy Kenya Limited
Ol Kalou Rd, Off Nanyuki Road
P.O.Box: 13578-00100 Nairobi, Kenya
Halkudhega Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waa “Be Safe In Your Kitchen With Safe Gas”.
Isla sanadkii 2012 -ka ee ay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) bilowday hawlaheeda ganacsi, waxay heshiis la gashay shirkada ugu weyn ee leh suuqyada laga adeegto ee ku yaala wadanka Kenya ee la yiraahdo (Naivas supermarkets). Waxayna ku heshiiyeen in suuqyada shirkadda (Naivas supermarkets) ay ku leedahay wadanka keenya oo dhan inay ku iibiso gaaska (Save Gas) ee shirkadda (Safe Energy Kenya Limited).
Isla sanadkii 2012 -ka waxay kaloo shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay heshiis la gashay shirkadda (Engen Petroleum Ltd) oo ah shirkadda ugu shidaaleyaasha badan wadanka South Africa. Faracyo badan oo shidaaleyaal ahna ku leh magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya. Heshiis kaas oo ah in shirkadda (Engen Petroleum Ltd) ay faracyada shidaaleyaasha ay ku leedahay wadanka Kenya oo dhan ay ku gado gaaska (Save Gas). Intii Mudadaas ka danbeysey gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ee haamaha amaanka ah ku jira, wuxuu noqday gaaska ugu badan ee laga isticmaalo wadanka Kenya.
Gaaska haamaha amaanka ah ku jira ee shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay iibiso waa gaaska caanka ah ee loo yaqaan (Safe Gas). Oo sadexda gal oo kala sareeya iyo aaburada midabyada kala duwan leh. Aalaa sidaad xayeesiimaha ku aragteen, gaaska (Safe Gas) waxaa lagu xayeesiiyaa caruur la ordeysa ama tuurta ku sidata. Taasoo muujinaysa siduu gaasku amaan u yahahay oo uu u fududyahay.
Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Safe Energy Kenya Limited) ayaa waxay xarumo ganacsi ay ku leedahay inata badan gobalada iyo degmooyinka keenya. Mudadii afarta sanadood ahayd oo ay shirkaddu jirteyna waxay noqotay shirkadda ugu macaashka iyo macaamiisha badan shirkaddaha gaask ee dalka Kenya. Shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) bil kasta waxay qaadataa boqolaal shaqaale ah oo u beeciya gaaska shirkadda. Waxay kaloo lacago dhiirigelin ah baqshiis ah oo aad u badan ay siisaa ganacsatada iyo shaqaalaheeda gaaska amaanka ah ee shirkadda (Safe Energy Kenya Limited).
Waxay kaloo shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay xarumo ganacsi ku leedahay xaafadaha magaalooyinka Nairobi oo dhan. Baqaarka iyo faraca shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay ku leedahay xaafadda soomaalida ee Eastleigh, Wuxuu ku yaalaa hoteelka shacabka reer Tanadland ay u badanyihiin ee (Hotel Xasbo) daarta ku dhegan. Magaalada (Mombasa) sidoo kalena waxay shirkaddu ku leedahay dhawr xarumood. Xaafadda soomaalida ee magaalada (Mombasa) xarunta shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waxay u dhowdahay moolka reer Tanadland, ee reer Cali-mire ay leeyihiin.
Si kastaba ha ahaatee walow ay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ay mudo gaaban ku qabsatay suuqa kenya, hadana waxaa la orankaraa arintii ugu muhiimsaneyd ee laga filahayey weli ma’aysan meelmarin. Taasoo ah inay warshad soo saarta haamaha gaaska amaanka ah ay samysato. Si kale hadaan u dhigana waxaa la orankaraa “shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) ganacsigeedu wuxuu la mid yahay sidii nin caano-teel ka ganacsada, oo caanaha iyo haamaha uu ku ganacsado labadaba soo iibsada. Calashaan badeecada laga mushtarayaa bil-shardi waxaa ah inay yeelato qiime saaran oo macaash loogu xisho.
Arinta kale, ee muhiimka ah waxa weey shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) waa shirkad cusub oo mudo afar sanood aan dhamayn jirtey. Saas oo ay tahay waxaa iska leh iskaashato hanti badan oo maaliyadeed haysata. Waxayna awoodaan inay wadanka Tanzania iyo Kenya ay hal mar labo warshaddood ay ka sameeyaan. Mudadii sadexda sano iyo todobada bilood ahayd oo ay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) jirtey, waayo’aragnimo muhiim ah ayey shirkaddu kororsatay. Qibradda ay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) kororsatay waxaa ugu muhiimsan, hanaanka beecmushteriga dalka Kenya ay gaaska uga beeciso “B2B Marketing”.
Metalan, baqaarada iyo warshadaha ugu badan ee ku yaala wadanka Kenya gaadiidka ganaha wax ku qaada ee loo yaqaan (Forklift), intooda badani waxay ku socdaan gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited). Gaaska lagu iibiyo inta badan suuqyada farcyada bad leh ee ku yaala dalka Kenya isaguna waa gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited). Sidoo kale gaaska lagu iibiyo inta badan shidaaleyaasha faracyada bad leh ee ku yaala dalka Kenya waa gaaska shirkadda (Safe Energy Kenya Limited). Shirkada (Safe Energy Kenya Limited) Shaqaalaha ugu muhiimsan ee u shaqeeya waa dadka gaaska u beec geeya. Mushaarka ay beeciyeyaashu qaataana waxaa dhawr jeer ka badan lacagta baqshiishka “Commission” ka ah ee ay qaataan. Hanaanka ay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) u abaalmariso shaqqlaheeda beeciyeyaasha ahna, waa habka wadamada waqooyiga amerika loola macaamilo shaqaalaha beeciyeyaasha “Field Salesman’s” ka ah. Taasoo qofka beeciyaha ah lacagta uu baqshiish ahaanta u helahayo ay ku xirantahay hadba cadadka heshiisyada uu saxiixo, ama hadba cadadka badeecadda uu gaday inta ay le’egtahay.
Marka talaabada xigta ee loo baahanyahay shirkadda (Safe Energy Kenya Limited) inay qaado, waa samaynta warshado tayo leh oo sameeya haamo amaan ah oo gaaska lagu shubo.